Kenyaanka qaba cudurka AIDS-ka oo ay suurta gal tahay in lagu takooro goobaha shaqada – The Voice of Northeastern Kenya
Kenyaanka qaba cudurka AIDS-ka oo ay suurta gal tahay in lagu takooro goobaha shaqada
Iyada oo maanta caalamka laga xusayo maalinta cudurka AIDS-ka ayaa waxaa jirto warbixin ay soo saaren gudi ka howl galo dalkani Kenya oo lagu sheegay in dadka kenyaanka ah ee cudurkan qabo ay suurta gal tahay in lagu takooro goobaha shaqo ee kala duwan.
Gudigan qaabilsan arrimaha firuusiga HIV-da iyo cudurka ka dhasha ee AIDS-ka ayaa takoorkan ku micneyay in uu keni karo dalacsiin shaqaalaha qaar loo diido, ama jagooyin hoose loo dhibo ama xaaladooda caafimad awgeed goob kale loo wareejiyo.
Kudhawaad 1.6 milyan oo kenyaan ah ayaa hada isticmaalaya daawada cudurkan loo adeegsado ee loo yaqaano ARVS halka kudhawaad 500,000 oo qof ay qabaan caabuqa HIV-da balse aynan xaaladooda si joogta ah ula soconin.
Takoorkan ayuu gudiga shaaca ka qaaday kadib markii in mudo ah baritaan laghu waday kiisas kala duwan oo arrintan ku saabsan.
Dhanka kale waxaa warbixinta lagu sheegay in dadka qaar cudurkan laga baaray iyada oo anan ogolaanshahooda la helin halka kuwa qaarna natiijadii ka soo baxday baritaanka qof sedexaad lala wadaagay oona kalsooni daro keentay.
Ilaa iyo hada cabasho la xiriirta kiisas dhan 800 ayaa gudiga loo soo gudbiyay balse waxaa la xaliyay 600 oo kiis keli.
Madaxa fulinta ee gudigan Anyumba Nyamwaya ayaa xusay in takoorka ka dhan ah dadka cudurkan qabo uu guda dalka aad ugu sareeyo halka ay si gaar ah u saameyso shaqaalaha haya jogooyinka hoose .
Guud ahaan dunida 78 milyan oo qof aya qabto cudurka AIDS-ka halka tan iyo markii ugu horeysay ee kiis cudurkan la xiriira la soo tabiyay uu galaaftay noolosha 35 milyan oo qof.
← Alfred Mutua oo Kalonzo Musyoka la xiriiriyay fadeexad si sharci dara ah lagula wareegay dul ka tirsan countigasi.
Maamulka qaran ee maareya dhismooyinka oo sheegay in aynan lahayn awood ay ku soo xiraan mulkiilayaasha guriyaha dumo. →